သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ဘလော့ဂါအကယ်ဒမီ
ဘလော့ဂါများရဲ့ အကယ်ဒမီပွဲရှိတယ်လို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောတာနဲ့ ကျွန်မ မနေ့က http://mmblogpress.com ကိုရောက်ဖြစ်လိုက်တယ်။
စီစဉ်သူတွေ ဘယ်သူတွေလဲ မသိသော်လည်း သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ အချိန်ပေးမှု၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကို ကျမ လေးစားပါတယ်လို့ ရှေးဦးစွာပြောလိုပါတယ်ရှင်။
ကျမ အနေနဲ့ ဘယ်ဘလော့ဂ်ဟာ အကောင်းဆုံးပါလို့လို့ ရွေးရခက်နေပါတယ်။ ဘလော့ဂ်တိုင်းဟာ သူ့အထွာနဲ့သူ၊ သူ့ကဏ္ဍနဲ့သူ ကောင်းကြတာချည်းပဲ၊ နောက်ပြီး ကျမ မဲပေးချင်တဲ့ ဘလော့ဂါအချို့ကို စာရင်းထဲမှာ မတွေ့ဘူး။ သူတို့ကို လူသိပ်မသိကြဘူး။ သူတို့ကလဲ လူအများအယူအဆမှာ မပူ(hot) ဘူးထင်တယ်...:P ။ နောက်ပြီး ကျမစိတ်ထဲမှာ မဆီမဆိုင် ဖြစ်နေတာ အတွေးအခေါ်တွေ၊ နည်းပညာ၊ အနုပညာများစွာပိုင်ဆိုင်ပါရဲ့နဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာ မပိုင်နိုင်သူတွေနဲ့ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်မကောင်းသူဘလော့ဂါတွေ၊ တစ်နာရီ ငွေကျပ်နှစ်ရာ မသုံးနိုင်လို့ သူငယ်ချင်းဘေးက ကွန်ပြူတာစကရင်ကို ထိုင်ကြည့်နေသူတွေ ကျမ ဘေးနာမှာ ရောက်နေသလိုပဲခံစားနေရတယ်။
ဘလောဂ် တော်တော်များများကို ကျမ ရောက်တယ်ဆိုပေမယ့် အကုန်လုံးကိုမရောက်ဘူး။ ရောက်ဖူးသမျှလေးကိုပဲ ဖတ်ပြီး၊ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးရာ၊ အကြိုက်တူရာ၊ ၀ါသနာတူရာကိုပဲ မဲပေးမယ် ဆိုပြန်ရင်လဲ ကျမ မမျှတရာရောက်မယ်။
ကျမ အနေနဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးတာ ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုထက် မျှဝေမှုတစ်ခုလို့ မြင်လို့ ကျမအနေနဲ့လည်း ဆုရဖို့နေနေသာသာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့တောင် မထိုက်တန်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်ကလဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မဲမပေးဘူးဆိုရင် ကိုယ်လဲ ၀င်အရွေးခံဖို့ မသင့်လို့ ကျမ နာမယ်ကို စာရင်းမှ ဖယ်ပေးဖို့ စာပို့လိုက်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် ကျမလို လူချည်းပဲဆိုရင်လဲ မဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဘလော့ဂ် လောကကြီး ပျင်းစရာဖြစ်နေမယ်။ This event is supposed to beafun event. ဒါကြောင့် စိတ်ဝင်စားသူများ ဒီမှာ မဲသွားပေးနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာပေးအပ်ပါသည်ရှင်။
Comments from ainchannmyay.com
1. HEY Ma lay,
Why do u post the ……. what’s should be or shall be or ought to be or meaned to be …..?(just kidding Naw)
Everything you meaned things are really makeanice to be for everyone who see your ‘..
I’m agree with your ’s ……..
thank for ur effort to all(…………)
Comment by mgmoekhin — December 30, 2008 @ 7:48 pm |
2. သဘူတောပါတယ်.. စိတ်သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်ပါတယ်။
Comment by byakga — December 30, 2008 @ 7:53 pm |
3. Very Happy New Year ahead Ma Lay..
Comment by K — December 30, 2008 @ 9:14 pm |
4. မပေးတော့ဘူး ခေါင်းကိုက်လို့
Happy new year ကျနော့်အစ်မ
Comment by မောင်မျိုး — December 30, 2008 @ 11:04 pm |
5. ဟုတ်တယ်အစ်မရေ.. ဘလော့ဂါတွေမစုံဘူးဖြစ်နေတယ်…။ အဆုံးသတ်တော့လဲ … အင်းမပြောတော့ဘူး..။ အစ်မရဲ့ စိတ်သဘောထားကိုတော့ ထောက်ခံတယ်..။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် Happy New Year ပါ (ဒီမှာတော့ ပြီးသွားပြီ)။
Comment by Phyo Evergreen — December 31, 2008 @ 9:46 am |
6. ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ် မင်္ဂလာပါဗျာ…
Comment by မောင်လူအေး — December 31, 2008 @ 9:53 am |
7. ဘယ်သူတွေဆုရမလဲ မဲမပေးခင်ထဲကသိပြီးသားကြီးပါ
Comment by လူပျက် — December 31, 2008 @ 5:53 pm |
8. သို့ပေမယ့် ကျမလို လူချည်းပဲဆိုရင်လဲ မဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဘလော့ဂ် လောကကြီး ပျင်းစရာဖြစ်နေမယ်။ This event is supposed to beafun event. ဒါကြောင့် စိတ်ဝင်စားသူများ ဒီမှာ မဲသွားပေးနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာပေးအပ်ပါသည်ရှင်။
………. မိမိ မည်သို့ ပင်ခံယူသည် ဖြစ်စေ သတိတရားဖြင့် ကြိုဆိုသော၊ ဆင်ခြင်တုံတရား ပါသော တင်ပြမှုအတွက် လေးစားမိပါသည်။။
Comment by မင်းဒင် — January 1, 2009 @ 9:10 pm |
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:17 PM
မပြောချင်လို့သာပဲ.. ပြောလိုက်ရတဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းရယ...